Daawo Guuxa dadweynaha Muqdisho	March 17, 2014 1:00 AM0 comments	Shacabka ku nool Magaalo Madaxda Muqdisho ayaa aad u hadal haya dhacdooyinka ka dhacaya Magaalada Muqdisho & Siyaasada Dowlada Somalia oo ay u arkaan mid sidii la rabay anan u socon. Arimaha ugu badan ay shacabka ku shaaxeeyaan ayaa ah Qaladaadka iyo amni darada ka jirta Magaalada Muqdisho & Dabacsanaanta […]
Daawo Video: Yeey u xiran yihiin qaar ka mid ah waddooyinka Muqdisho?	March 16, 2014 1:00 AM0 comments	Shacabka ku nool Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho & Darawalada Gawaarida Dadweynaha oo ka cabanaya xirnaansha Wadooyin muhiimka u ah isu socodkooda Magaalada iyo Xaafadaha ay dagan yihiin taas oo ay xirteyn Hey’addo & Safaarado. Arinta laga cabanaya ayaa ah in Xirnaanshaha wadooyinka qaar aysan ka hadli karin Madaxda dowlada […]
VIDEO: Dhacd xanun badan Hooyo Soomaaliyeed ku qabsatay Sacuudiga	March 14, 2014 10:40 AM0 comments	Hooyo Soomaliyeed oo Lagu Magacaabo Sahro Maxmed Salaad ayaa kasoo Degtay Garoonka Diyaarada ee Aadan Adde Airport ee Magaalada Muqdisho, Kadib markii Tacadi, Iyo Tarxiil ay Isugu soo Dareen Ciidamada dalka Sacuudi-ga. Waxay ka hadhashay Hooyo Sahro Qiso xanuun Badan, Dhibkii loo gaystay, uyadoo Uur-leh oo guriga laga soo saaray, […]
DAAWO: Hindi ka yaabiyey CAALAMKA	March 12, 2014 2:00 AM0 comments	Nin u dhashay Wadanka Hindiya ayaa Calaamka ka yaabiyay kadib markii uu sameeyay fal aan nuuciisa horay loo arkin asagoo weliba ku sameynaya Xaaskiisa arin cajiib ah. Wuxuu sameynayaa waxyaabo u eg indho sarcaad, isaga oo seef, masaar iyo waxyaabo kale oo halis ah ku gooynaya qunbe iyo waxyaabo kale, […]
Video: Arrin mucjiso ah magaalo qofkii tagaabo uu mataano ku dhalaayo	March 10, 2014 3:30 PM0 comments	Muuqaalka maanta aan idiin soo gudbinaya waa mid Arin Mucjiso cajiib ah wata ee nala daawo kaasoo ah Magaalo qofkii tagaa uu dhalayo Mataano. Qof walboo aduunka jooga waxuu arkayaaa wax ka yaabiya maantana waxaan anigu arkay Muuqaal iga yaabiyay oo ka hadlaya Magaalo qofkii tagaa uu dhalayo Mataano ee […]
Daawo: Hantida Qaranka SOOMAALIYA oo ku dayacan waddamo dariska ah	2:00 AM0 comments	Caasimada Online: Muuqaal kooban oo ka hadlaya Hantida Qaranka Soomaaliyeed ee wadamada dibadda ah ku dayacan kadib markii aysan helin Dad soo raadsada oo sheegta in ay lee yihiin Hantidaasi Qaran. Aqristoow waxaan hubaa in aad Ilmeyneyso marka aa daawato Muuqaalkani waxaadna dareemeysaa in Hanti badan oo Soomaali ay lee […]
VIDEO: La yaabka ka jira MUQDISHO	March 9, 2014 5:52 PM0 comments	Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ka soconaya Horumar dhan walba leh kaas oo si weyn ugu fidaya Magaalada Muqdisho waxaana dib u soo noqonaya Nidaamkii Dowliga ahaa. Muuqaal la yaab leh oo ka hadlaya Sheeko ka jirta Muqdisho oo dadka ay aad u hadal hayaan ayaan jacelahay in aan […]
Video: Qaxooti ku dhawaaqayo Allaahu Akbar oo xoog ku soo galay SPAIN	March 7, 2014 2:00 AM0 comments	Jasiirada Melilla ee dalka Spain waxaa si xoog ah ku soo galay Qaxooti qaarada Africa ka yimid oo aad u fara badan kuwaas oo in mudo ah ku dhibaateeysanaa gudaha dalka Marooko balse iminka qaxootigaan ayaa intooda badan jasiirad ku taala dalka Spain xoog ku soo galay. Qaxootigaan qaarada Africa […]
VIDEO: Mucjiso ka tagan mid ka mid ah Magaalooyinka Dunida ugu cansan….	March 3, 2014 2:25 PM0 comments	Magaalada Peking ee caasimada dalka Shiinaha oo ka mid ah Magaalooyinka ugu saxmada & dadka badan ayaa waxaa ka jira arin mucjiso ah oo Caalamka ka yaabay. Muuqaalo ku saabsan arintani ka taagan Wadanka Shiinaha ayaa waxaa laga sii deynayaa Tv-yada Caalamka kadib arin ka yaabisay Shacabka Wadankaasi ee nala […]
Video: Ma ogtahay in mucjisoyinkan ay lee yihiin biyaha Zamzamka?	March 1, 2014 2:00 AM0 comments	Biyaha Zamzamka ee laga keeno dhulka barakeeysan ee Madiina ayaa waxeey lee yihiin Mucjisooyin kaa yaabin doono & Faa’idooyin badan oo aadan ogeyn. Aqristoow daawo muuqaal laga sameeyay Mucjisooyinka ay lee yihiin Biyaha Zamzamka ee aadka u wanaagsan ee nala daawo Muuqaalkani Xiisaha badan ee aan hubo in aad ka […]